King Zero: April 2010
This is not an election.It is likeafootball game with only one team playing
Ashin Sopaka: Do you want to join? (laughs) it is possible. I can’t say for sure but it is possible. I heard just yesterday that NLD is organizing. Because of the new election law they can not register asaparty. Most of their members are in prison or have been in prison. According to the new law prisoners or ex-prisoners can not be members ofaparty. Aung San Suu Kyi her self is under house arrest, has faced trials. So it is very difficult for them to register. They reject the constitution but if they want to register asaparty they would automatically accept it. The party, their movement is now standing with the back against the wall, there is now way to move anymore. So they have to do something for this reason it is possible. This time it is very important for all to coorporate, students, monks, even soldiers and all people in the country and around the world. Then we can see the change. I believe in non violence. Non violence is our background, also Daw Aung San Suu Kyi believes in non violence like many other people around the world. With this power we have to continue. Inside Burma there are many people who would like to join us, so with this power we can do. Of cause we hope that international organizations such as UN will take care of us. They always say: “We are closely monitoring” but they are in New York. They are just talking very nicely. What does this mean “closely monitoring”? What are they doing? In Burma the regime is shooting the monks on the street, people are dying. But they are only saying “we are closely monitoring”
Posted by dhamma at 8:17 AM0comments
you can kill me but you can not shut my mouth
Nyi Nyi AungThe Voice of Nyi Nyi Aung
Nyi Nyi Aung is 41 years old and originally from Rangoon. He currently works asacomputer engineer and political activist in America.
I speak to Nyi Nyi Aung on the phone, on Monday 19 April 2010.
“You can kill me but you cannot shut my mouth.
I do not want to get hurt, but I prepare for it. Anytime, you can get caught. But my fear for Burma’s people and future is bigger than my own fear.”
“My plan is to tear down the regime and promote human rights and democracy anywhere it is needed. I do this by lobbying and raising awareness. Both inside and outside Burma. We need international help to do this. I also want to tell people about the non-violent way and how to do it. I want to motivate the people to believe and to trust themselves. They have to stand up for their rights. The Burmese people have suffered under military regimes since 1958. They have had no time to practice democracy. The people do not know what democracy and human rights mean.”
“When I got caught last September, they asked me ‘are you afraid?’ I said: ‘No, I have the right to do this. I am aware of my rights.’
I feel very sorry for the Burmese people inside the country. Many of them do not know this. They do not know what their rights are. We need to teach them to stand up for their rights.”
“Ask your governments to put more pressure on Tan Shwe. This is the only way to get peace. Pressure by sanctions on the regime and its cronies. The current policy does not work: it is just words. We need real actions. Do not just say sanctions, but boycott!
I do not agree with the engagement policy of the United States: the regime does not understand the language of freedom. It is stick and carrot policy.”
Does Nyi Nyi Aung haveamessage for people in the West or in Burma?
“Think deeply about what you really want for the future. You own your own life. If you love peace, justice, equality, go and do it by yourself! Trust yourself. Do it!
Do not wait for Daw Aung San Suu Kyi to fix it.
Everyone has to work if they want peace and freedom!
There isalack of motivation.”
10:08 Am စားအုန်းဆီထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်တွေရောကာ မခဲအောင်လုပ်ပြီး ရောင်းချနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အီလန်ဆပ်ပြာမှုန့်က ဈေးပေါတော့စားအုန်းဆီ တစ်ပီပါ (၄၂) ဂါလံကို အီလန်တစ်ထုပ် (၂၀၀ ဂရမ်) ထည့်တယ်လို့
“ဆီကို ရေချိုး ဆေးရိုး မီးလှုံ ကောက်ရိုးတောင်လိုပုံ” ဆိုတဲ့ စကားပုံကို အမြတ်တနိုး ရွတ်တတ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးဟာ ဆီစားကြတာ
ကြမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ ဆီပေါလို့လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မပေါတော့တာ ကြာလှပါပြီ။ ဒီစကားပုံက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်သွားပါပြီ။
မြန်မာတိုင်းမ်ရဲ့ အဆိုအရဗမာတယောက်ဟာ တနှစ်ကို စားသုံးဆီ (၅) ပိဿာနဲ့ (၄၉) ကျပ်သားစားသုံးပါတယ်။ လူဦးရေ (၅၂) သန်းနဲ့ တွက်မယ်ဆို တနှစ်ကို ပိဿာပေါင်း (၂၈၅)သန်း၊ တန်အားဖြင့် (၄) သိန်း စားသုံးပါတယ်။
ဆီအဖြစ် ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ စားအုန်းဆီတို့ကို အဓိက အသုံးပြုရာမှာ ပြည်တွင်းမှာ စားဆီ ၅၀%လောက်ပဲ
ထွက်ပြီး ကျန်တဲ့တ၀က်ကို ပြည်ပက တင်သွင်းရပါတယ်။အဓိက တင်သွင်းတဲ့ နိုင်ငံက မလေးရှားဖြစ်ပြီး သွင်းတဲ့ဆီအမျိုးအစားက စားအုန်းဆီ ဖြစ်ပါတယ်။တနှစ်ကို တန်ချိန် (၂) သိန်း တင်သွင်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းမှာ ဧက (၂) သိန်းလောက် စိုက်ဖို့ လျာထားတာ (၁) သိန်းလောက်ပဲစိုက်နိုင်သေးတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့လက ရေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာတိုင်းမ်က၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ဧက (၇) သောင်းလောက်ပဲစိုက်နိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းမ်အဆိုက အမှန်နဲ့
ပိုနီးစပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (၁) ဧကကို (၂.၅) တန်ထွက်ရင် ဧက (၇) သောင်းကို တန်ချိန် (၁) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ ထွက်ပါတယ်။ မလေးရှားကတနှစ်ကို စားအုန်းဆီ တန် (၂) သိန်း တင်သွင်းတယ်ဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာစားအုန်းဆီ နှစ်စဉ် တန်ပေါင်း (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ စားနေပါတယ်။ဆင်ဟွာက ပြောတာယူရင် နှစ်စဉ်စားတဲ့ဆီက စားအုန်းဆီချည်းပဲ တန် (၄) သိန်းခွဲ
ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ တန် (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ စားတယ်ဆိုတော့ လိုတဲ့ တန် (၂) သောင်းခွဲက ပဲဆီနဲ့
ချုပ်လိုက်ရင် စားအုန်းဆီတွေပြည်တွင်းမှာ လှိုင်ဘောလယ်နေပါတယ်။ တန် (၃) သိန်း (၇)သောင်းခွဲကို လူဦးရေ (၅၂) သန်းနဲ့စားရင် လူတယောက်ဟာ တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ(၅) ပိဿာနဲ့ (၁၅) ကျပ်သား စားသုံးပါတယ်။
စားအုန်းဆီက ဒီတိုင်းထားရင်း ခဲတယ် ဆိုတာ လူတော်တော်များများ သိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အခဲဖြစ်တဲ့ အပူချိန်က မြင့်ပါတယ်။ (၃၁) နဲ့ (၄၁) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကြားမှာအခဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ အောက်ပြည်အောက်ရွာနဲ့ အညာမှာ တနှစ်လုံးပျမ်းမျှအပူချိန်က (၃၀) ဒီဂရီနဲ့ အထက်မှာ ရှိတာဆိုတော့ စားအုန်းဆီခဲဖို့လွယ်တဲ့နေရာပါ။
စားအုန်းဆီခဲရင် ပျော်သွားအောင် တနေ့ကို နည်းနည်းချင်းစီ အပူပေးရပါတယ်။ အပူသိပ်ပြင်းရင် ဆီထဲက အဆီတွေပျက်သွားလို့
အနံ့ဆိုးသွားပါတယ်။ ဒီတော့ စားအုန်းဆီကို ထိန်းသိမ်းရတာ ခက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ရောင်းတဲ့လူတွေက အလွယ်လိုက်ပြီး အဆီတွေပျော်အောင် ဆပ်ပြာမှုန့်ရောလိုက်ပုံရပါတယ်။
ဆပ်ပြာမှုန့်သွေးလမ်းကြောင်းထဲရောက်သွားရင် သွေးထဲမှာ အက်ဆစ်ပမာဏများလာတာ၊ အစာလမ်းကြောင်းပေါက်ကုန်တာ၊ အသက်ရှုကျပ်တာ၊ သွေးဖိအားကျတာ၊ လည်ချောင်းယောင်လာတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အင်္ဂါတွေပျက်စီးတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၂၀၀၉) ခုနှစ် ဇွန်လ ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် စားအုန်းဆီ တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၁၄) ဒေါ်လာ
ပေါက်ပါတယ်။ ပိဿာနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆို တစ်ပိဿာကို (၉၉) ဆင့်ပဲ ကျပါတယ်။
တစ်ဒေါ်လာပဲ ထားပါတော့။ ဗမာငွေနဲ့ဆို ကျပ် (၁၁၀၀) မပြည့်ပါဘူးဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာစားအုန်းဆီ တပိဿာ ကျပ် (၂၁၀၀) ၊ မန္တလေးမှာ ကျပ် (၁၉၁၀) ၊တောင်ကြီးမှာ ကျပ် (၂၁၀၀) နဲ့ စစ်တွေမှာ ကျပ် (၂၂၀၀) ပေါက်ပါတယ်။ စစ်တွေက
လူတွေက စားအုန်းဆီကို ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေးထက် ၂ဆပိုပေးပြီး စားရပါတယ်။
စားအုန်းဆီကို မလေးရှားကသွင်းနေတာ ဦးပိုင်ကပါ။ လက်ကား၊ လက်လီအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးတကယ်စားတဲ့လူဆီရောက်တော့ သွင်းဈေးရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ဈေးကြီးတာက ထားတော့။ လူတွေ အဆိပ်သင့်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ
ရောရတာပါလည်း။စားသုံးသူက ဘာအခွင့်အရေးမှ မရှိတာ ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသက်ကို အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့လူတွေကို တရားစွဲလို့ရတဲ့ဥပဒေရှိတာကို သုံးရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ တရုတ်ပြည်မှာတောင်နို့မှုန့်ထဲ မယ်လမင်းရောတဲ့လူတွေကို သေဒဏ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဗမာပြည်မှာ စားသုံးသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေရှိဖို့ လိုနေပါပြီ။
ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ စားသုံးသူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး အစားအစာတွေကို အဆိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကို တရားစွဲရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ တနှစ်ကို အဆိပ်ရည် (၅) ပိဿာ သိသိကြီးနဲ့ တိုက်နေတာကို
Posted by dhamma at 8:37 PM0comments
စာကြည့်တိုက်တွေ ဖွင့်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေကို ပညာတွေ ဗဟုသုတတွေ ပြည့်စုံတဲ့ သူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ငယ်ငယ်က စာဖတ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာမှာ စာကြည့်တိုက် မရှိတော့ စာဖတ်ဖို့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အရွယ်ရောက်လာရင် စာကြည့်တိုက်တွေ ထောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားခဲ့တယ်။ စာကြည့်တိုက်တွေဟာ ပညာရေးရဲ့ ပင်မရေသောက် မြစ်ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာဟာ လူအများစုကြီး စာမဖတ်ကြခြင်းပါပဲ။ စာဖတ်တဲ့လူ တစ်ယောက်လောက်က စကားပြောရင် ၀ိုင်းငေးမော နားထောင်တဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရှိကြတာ များပါတယ်။ မှားတယ်မှန်တယ် ထောက်ပြနိုင် ဝေဘန်ဆွေးနွေးပြနိုင်တာ အင်မတန် နည်းပါးပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပြောပြတဲ့သူဟာလဲ သူပြောတာတွေ လူတွေ ၀ိုင်းနားထောင် နေတာကို ဂုဏ်ယူရင်းနဲ့ ကိုယ်ပြောတာတွေ မှားလားမှန်လား မသိတော့ပဲ ငါဟာ လူတတ်တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မာနထောင် လာပြန်ရော။ ပိုဆိုးတာက ရွာတွေမှာဆို အဲဒီလို ဦးဆောင်ပြီး ပြောပြမဲ့ သူတောင်မရှိတော့ သူတို့တိုက်ခဲ့တဲ့ နွားတိုက်ပွဲတို့ ကြက်တိုက်ပွဲတို့ချဲတို့ ဘောလုံးလောင်းပွဲတို့ အကြောင်းကို ထိုင်လေပန်းရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားကြတာ များပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်သာသနာ ကိုယ်နိုင်ငံအတွက် တန်ဖိုးရှိ အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေဖြစ်မလာဘဲ တန်ဖိုးမဲ့သူ အဖြစ်နဲ့နိဂုံးချုပ် သွားကြတာ များပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်တွေဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေကို မွေးထုတ်ပေးရာဌာနလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့လို တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေကို စာကြည့်တွေကပဲ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေက မွေးထုတ်ပေးရာ ဌာနတွေ အင်မတန် နည်းပါးနေပြီး လူမိုက်တွေ မွေးထုတ်ပေးရာဌာန ဖြစ်တဲ့ အရက်ဝိုင်း၊ဖဲဝိုင်း၊ လောင်းကစား ၀ိုင်းတွေ၊ အာဝါဒေးပွဲတွေ၊ ချဲထီဒိုင်တွေ တနေ့တခြား ပိုမိုများပြားလာတာဟာ အင်မတန်မှကို ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒါတွေကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပြီး စာကြည့်တိုက်တွေ၊ ပညာရေးဌာနတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဒုက္ခပေးနေတာဟာ လုံးဝကိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ပညာရေးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက် ပိတ်ပင်လေ့ရှိပါတယ်။ ပညာတတ်အများစုကို ထောင်ထဲထည့်ထားပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်ပြ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချပြတာဟာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ သူတို့အလွန်ကြောက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သိထားတာက ပညာတတ်တဲ့သူတွေသာ သူတို့ကို တော်လှန်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီး သိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ အကြောက်ဆုံးဟာ ပညာရေးပါပဲ မိမိတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းပဲ သူတို့အကြောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပညာရေးကို အခက်အခဲတွေကြားထဲကပဲ မရရအောင် တည်ဆောက်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဦးဇင်း ပြည်တွင်းမှာ နေစဉ်က အခက်အခဲတွေ ကြားထဲကပဲ စာကြည့်တိုက်ပေါင်း ၁၂ ခုလောက် တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စာကြည်တိုက်မှာ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျပန်စကားပြော သင်တန်းတွေ၊ ကွန်ပြူတာ၊ အင်တာနက်သင်တန်းတွေ၊ ကျူရှင်အခမဲ့သင်တန်းတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေ၊ အတွေးအခေါ် သင်တန်းတွေကို ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ကနေ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ အများကြီးမွေးထုတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှုံ့အပြားမှာ စာကြည့်တိုက်တွေ တည်ထောင်ပြီး တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် ပညာတတ်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေများများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဟာအရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများစုဟာ လိုအပ်တာကို မလုပ်ကြပဲမလိုအပ်တာကို လုပ်ကြတာများပါတယ်။ ခြေလေးချောင်းနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ခုံတစ်ခုံကို နောက်ထက် ခြေတစ်ချောင်း ထပ်ထည့်ရင် အလကားပါပဲ။ ရှုပ်ရုံပဲရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်လိုအပ်နေတာက ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးပါ။ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးဖြစ်ဖို့ စာသင်ကျောင်းတိုင်းမှာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းမှာ၊ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ၊ မြို့တိုင်းမှာ စာကြည့်တိုက်တွေ ရှိရပါမယ်။ ပြည်သူတွေကိုစာတွေ ဖတ်လာလာအောင် စာကြည့်တိုက်တွေက နည်းမျိုးစုံနဲ့ စည်းရုံးရပါမယ်။ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ကျပန်းစကား ပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးရပါမယ်။ စာပေဟောပြောပွဲတွေ ကျင်းပပေးရပါမယ်။ ဦဇင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေစဉ်က အားလုံးကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ စာဖတ်အားတွေ ကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမို များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ နည်းမျိုးစုံ ဒုက္ခပေးတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဒုက္ခရောက်ရောက် အခက်အခဲတွေ ဘယ်လောက်လောက်ပဲကြုံကြုံ ကျေနပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျေကျေနပ်နပ် ရွေးချယ်ထားတဲ့ လမ်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘယ်စစ်အာဏာရှင်ကမှ ကိုယ့်ကိုသနားပြီး အသာတကြည် လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ယုတ်မာလို့ရသလောက် ယုတ်မာမယ် ကောက်ကျစ်လို့ ရသလောက် ကောက်ကျစ်မယ် အာဏာပြလို့ရသလောက် ပြပါမယ်။ သူတို့ဟာနောက်ဆုံး ထွက်သက်ထိ သူတို့အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်လို့ရသလောက် ဆုပ်ကိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုတွေ ဗဟုသုတတွေ ရှိလာတာနှင့်အမျှ သူတို့ဟာနောက်ကို ဆုတ်ပေးရပါတယ်။ ရှေ့ကို လုံးဝတိုးလို့ မရပါဘူး။ အခုဆိုရင် အာဏာရှင်ရဲ့ ကျဆုံးခန်းဟာ လက်တစ်ကမ်း အလိုမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုိရင် ပြည်သူလူထုတွေဟာ မျက်စိတွေ နားတွေပွင့်လာကြပြီ။ ဒါဟာမျက်စိတွေ နားတွေဖွင့်ပေးရာ ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာကြည့်တိုက်တွေ ပေါများလာ လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်တွေ ဒီထက်ပိုပြီး ပေါများဖို့အများကြီး လိုပါသေးတယ်။ အများကြီး ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစား ရအုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဦးဇင်းဟာ ရောက်လေရာမှာ စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်တယ်။ ဘာသာဗေဒ သင်တန်းတွေဖွင့်တယ်၊ ပညာရေးကို မြင့်တယ်။ပညာရေးမြင့်မားလာတာ နှင့်အမျှ ကိုယ်လူမျိုး ကိုယ်နိုင်ငံသည်လည်း ကျိန်းသေမုချ မြင့်မားလာကာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဂုဏ်ရောင်ဝင့်ထည် လာပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမြင့်မားဖို့ စာကြည့်တိုက်တွေ သင်တန်းတွေ ကြိုးစားတည်ထောင်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းပြောကြားရင်း………………………
အသေ၀နာ စ ဗာလာနံ …..လူမိုက်ကိုမမှီဝဲမပေါင်းသင်းရခြင်း
ကိုအမှတ်ရလို့ပြန်လည်ရေးသားပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကတယ်တော်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာပေ၊ ဂျပန်စာပေ၊တရုပ်စာပေ၊ပါဠိစာပေတို့ကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်။စာသင်နည်းစနစ်လည်းတကယ်တော်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ရင်းအတွေးအခေါ်အယူအစတွေကိုပါသင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။တစ်နေ့တပည့်တို့တဲ့ တွေ့တဲ့သူနဲ့သင့်အောင်ပေါင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုတွေ့ဘူးကြ လားတဲ့။တွေ့ဘူးတာပေါ့မြန်မာတစ်နိုင်လုံးပြောဆိုနေကြရေးနေကြတာပဲ။သီချင်းတောင်ရှိသေး တာ။အေးတပည့်တို့တဲ့ တွေ့တဲ့သူနဲ့သင့်အောင်ပေါင်းဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ အသေ၀နာစ ဗာလာနံ၊လူမိုက်ကိုမမှီဝဲမပေါင်းသင်းနဲ့ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဖျက်ပစ်လိုက် ရမှာလားတဲ့…………… ဟုတ်တယ်၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက လူမိုက်ကို မပေါင်းသင်းနဲ့လို့မြတ်စွာဘု ရားဟောထားတဲ့စကားကိုတော့ လစ်လျူရှု့ထားကြပြီး ဘယ်သူရေးမှန်းမသိတဲ့ တွေ့တဲ့သူနဲ့ သင့်အောင်ပေါင်းဆိုတာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကြီး
သုံးစွဲနေကြလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတာဟာလုံးဝကိုမသင့်လျော်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စာရေးသူတို့ နိုင်ငံဟာလူမိုက်တွေတစ်နေ့တခြားပိုပိုများများလာ နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူသာသနာ့တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)မှာစာသင်နေစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ စာရေးသူတို့နေတဲ့မန္တလေးဆောင်က သူငယ်ချင်းတစ်ပါး အပြင်ကပြန်လာပြီးကျန်တဲ့သူ ငယ်ချင်းတွေကိုကြွားနေပါတယ်။သူစာအုပ်ဈေးပွဲတော်ကိုရောက်ခဲ့ကြောင်း အဲဒီဈေးပွဲတော်မှာ ၀န်းကြီးချုပ်ခင်ညွှန့်နဲ့အတူတူဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရကြောင်းကိုကြွားနေပါတယ်။ကျန်နားထောင်နေတဲ့ သူတွေကို သူနဲ့အတူတူမလိုက်ခဲ့လို့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးမကြုံရသလိုပြောနေပါတယ်။ စာရေးသူက အဲဒီသူ ငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဟေ့သူငယ်ချင်း မင်းကကွာတစ်ကမ္ဘာလုံးက သူခိုးဂျပိုးလို့သတ်မှတ် ထားတယ်၊ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်ပြန်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ သူခိုးတွေနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတာကို ဂုဏ်ယူနေတော့မင်းရင်ထဲမှာကိုယ်က သူခိုးစိတ်ရှိနေလို့ပေါ့ကွလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တို့ကတော့ အဲဒီလူမိုက် လူယုတ်မာတွေနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်မဲ့အစား နွားကြောင်းသားနဲ့တွဲဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးဂုဏ်ယူမယ် ကွလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူလဲဆက်မပြောရဲတော့ပဲပါးစပ်ပိတ်သွားပါတယ်။ စာရေးသူသာ ၀င်မပြောရင် ဆက်ပြီးကြွားနေအုံးမှာပါ။ဒါဟာသူတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများဒီအတိုင်းဖြစ်နေကြတာပါ။ဟီရိဆိုတဲ့အရှက်တရားမရှိကြ တော့ပါဘူး။ရှက်ရမှန်းကြောက်ရမှန်းမသိကြတော့ပါဘူး။
မဟနဆရာတော်ကြီးတွေကြည့်ပါလားကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်သာသနာကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူယုတ်မာ ဗာလဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုပေါင်းသင်းနေရတာကိုကျေနပ်နေကြပါတယ်။မျက်နှာတွေမှာပြုံးပျော်နေ ကြပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာသနာ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော် တွေကိုမလိုက်နာပဲ လူမိုက်တွေခိုင်းတာမှန်သမျှလုပ်နေတာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားခြင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ တို့အဂ္ဂမဟာဂန္ဓ၀ါစကတို့ ဆို့တဲ့ဘွဲ့တံဆိပ်တွေကို ဒီဘာမှမတက်တဲ့သာသနာ ဖျက်တွေဆီမှာ ပိုက်ဆံသိန်းနဲ့ချီပေးပြီးသွားယူနေကြတာဟာ အလွန်ကိုအရှက်မရှိရာကြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသက်တော်ထင်ရှား ရှိနေသေးရင် အဲဒီလိုအရှက်မရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပေးနေကြ ဖြစ်တဲ့မောဃပုရိသ အချီးနှီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုတော့ရကြမှာသေချာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဘာလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားတွေကိုမလိုက်နာကြလို့လက် တွေ့မကျင့်သုံးကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။အသေ၀နာစ ဗာလာနံဆိုတဲ့ မင်္ဂလာတရားတော်ကိုရွတ်ဆိုရုံပဲ ရွတ်ကြပြီးတော့လက်တွေ့မကျင့်သုံးကြပါဘူး။ဆရာအောင်သင်းပြောသလို အရွတ်ကြီးပဲဆိုတော့ တစ်ဆယ်သားငါးကျပ်ပဲရတာပေါ့။တန်ဖိုးမထွက်ဘူးပေါ့။ မင်္ဂလာတရား၃၈ပါးထဲက အခုဆွေးနွေး ပြနေတဲ့ အသေ၀နာစ ဗာလာနံ လူမိုက်ကိုမမှီဝဲမပေါင်းသင်းနဲ့ဆိုတာကိုလိုက်နာကြည့်ပါ ဒီနေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးလိုက်နာကြည့် ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီရပါမယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံဟာလူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းနဲ့(အသေ၀နာစဗာလာနံ)ကိုလက်တွေ့လိုက်နာကြလို့ဒီမိုကရေစီရသွား တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံမှာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းထားတော့ ဒီလူမိုက်တွေခိုင်းတာတော့ဒို့မလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့နဲ့မပေါင်းဘူးဆိုပြီးဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးနီးပါး နှုတ်ထွက်ကြပါတယ်။အလုပ်တွေမဆင်းကြတော့ပါဘူး။ရုံးတွေဖွင့်မည့်သူမရှိလို့ပိတ်ထားလာရ ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကလည်းသူတို့လက်အောက်တော့မလုပ်ဘူးရရာအလုပ်တံမြက်စည်းလှည်းတာကအစ လုပ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းဆရာတွေကလည်းနှုတ်ထွက်ကြပါတယ်။ပြည်သူတွေဝန်ထမ်းတွေတက်ညီလက်ညီ ၀ိုင်းတော်လှန်လိုက်ကြလို့ ပြည်သူ့လက်ကိုအာဏာပြန်လွဲအပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာအသေ၀နာစ ဗာလာနံ လူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းနဲ့ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြလို့လက်တွေ့အကျိုးခံစားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူတို့နိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ကိုးကွယ်တယ်တာပြောတာ ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့စကား ကိုမလိုက်နာကြသူတွေ မကျင့်သုံးကြသူတွေများပါတယ်။မဟနဆရာတော်တွေ ပါမောက္ခ တွေ ဒေါက်တာတွေ ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမတွေ တော်တော်များများအရှက်မရှိကြတော့ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတွေခိုင်းတာကို လုပ်ရတာကိုပဲဂုဏ်ယူနေကြပါသေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ စာရေးသူသာသနာ့ တက္ကသိုလ်နေစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကနေပြီးပြောပါတယ်။အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် မဟန ဆရာတော်တွေမှာအရှက်တရားမရှိကြတော့ဘူးတဲ့။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေခိုင်းတာမှန်သမျှအကုန် လိုက်လုပ်ပေးနေကြတယ်။တပည်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေး တက္ကသိုလ်အစည်းအဝေးမှာ မဟန ဆရာတော်တွေထဲကတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ မုံရွာ ဦးစန္ဒိမာကနေပြီး ထပြောတာက အရှင်ဘုရားတို့အခု မူလတန်း၊ပထမငယ်တန်း၊ပထမလက်တန်း၊ပထမကြီးတန်းစာမေးပွဲတွေမှာ မြန်မာစာမသင်ရဆိုပြီး ပြဌာန်းပြီးပါပြီ။တက္ကသိုလ်မှာလဲမြန်မာစာမသင်ရမြန်မာစာပယ်ပေးပါလို့ထပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ် ပါမေါက္ခဆရာတော်တွေ ကထိကတွေ မော်ကွန်းထိမ်းတွေ တစ်ပါးမှမပြောရဲပါဘူးငြိမ်နေကြပါ တယ်၊ ကံကောင်းတာက အဲဒီအချိန်မှာဆရာကြီးရှိနေလို့ပါ။ဆရာကြီးကထပြီးအဲဒီကိုယ်တော်ကို မေးလိုက်ပါတယ်။အရှင်ဘုရားက တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာပယ်ပေးပါ၊ မြန်မာစာမသင်ရလို့ပြောရ အောင်မြန်မာစာဘယ်လောက်တတ်ပါသလဲ၊ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်ပါသလဲလို့ဆရာကြီးက မေးလိုက်ပါတယ်။မတတ်ပါဘူးဆရာကြီးလို့ပြောပြီးပြန်ထိုင်သွားပါတယ်။ဆရာကြီးကဆက်ပြောပါတယ်၊တက္ကသိုလ်မှာ သံဃာတော်တွေဘီအေ၊အမ်အေဘွဲ့ယူစာတမ်းတွေရေးနေကြတာမြန်မာစာနဲ့ရေးပြီးတင်နေတာ မြန်မာစာမသင်ပဲ ဘယ်လိုရေးကြမှာလဲလို့ဆရာကြီးပြောတဲ့အခါ ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့ ဆရာကြီးက ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကို မပြောရဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်မှဘာကြောင့်ပယ်သင့်တယ်ဘာကြောင့်မပယ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပြောရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ မဟန ဆရာတော်တွေ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေခိုင်းတာ မှန်သမျှ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ပြောသင့်မပြောသင့်မစဉ်းစားနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ခိုင်းတာမှန်သမျှအကုန်လိုက် လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ ဒါဟာသက်သေ သာသဓက တွေဖြစ်ပါတယ်။မဟန ဆရာတော်တွေဟာ နအဖဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေခိုင်းတာမှန်သမျှလိုက်လုပ်နေရတာကိုရေးပြရင်ကုန်နိုင်ဘွယ်မရှိပါဘူး။ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ဆရာကြီးကစာရေးသူတို့ကိုစာချရင်းပြောပါတယ်၊ တပည့်တော်အဲဒီ မဟန ဆရာတော်ကိုမေးစဉ်က မြန်မာစာတတ်ပါတယ်ပြောရင် မြန်မာစာမေးပြီး လူလယ်ကောင်မှာအရှက်ခွဲမလို့တဲ့။ ကံကောင်းလို့မတတ်ဘူး ပြောပြီးပြန်ထိုင် သွားလို့ပါ။ ဆရာကြီးကစာချရင်းဆက်ပြောပါတယ်။ တပည့်တော်စစ်တက္ကသိုလ်မှာစာသင်ပြပေး ဘူးတယ်တဲ့။ တပည့်တော်သင်ပြတဲ့အုပ်စုတွေက ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်တို့အုပ်စုတွေလို့ပြောပါတယ်။ သူတို့တိုင်းမှူးတွေ ၀န်းကြီးတွေ ဖြစ်နေကြတော့ဆရာကြီးဆီလာကြတယ်၊ဆရာကြီးဘာလိုလဲ လိုတာပြောပါ၊ ပြီးတော့ဆရာကြီးကို ဘွဲတံဆိပ်တွေလဲချီးမြင့်ချင်လို့ပါလို့ပြောတော့ ဆရာကြီးက ဟာမလုပ်ကြပါနဲ့ ငါဒီအတိုင်းနေတာကောင်းပါတယ်။ မင်းတို့ပေးတဲ့ဘွဲ့ယူလိုက်ရင် ငါ့မှာရှိတဲ့သိက္ခာ တွေကျကုန်ပါအုံးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးကဆက်ပြောပါတယ် တပည့်တော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ တပည့်တော်လိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်ငြင်းနိုင်သေးရင် အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာတော်တွေက ပိုပြီးတော့ငြင်းနိုင်ရမှာပေါ့တဲ့။ အခုတော့အရှက်မရှိ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပေးတဲ့အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိသွပ်ကိုပိုက်ဆံပေးပြီးယူနေကြတာအံ့သြလို့မဆုံးဘူးတဲ့။ တပည့်မကောင်းဆရာ့ ခေါင်းတာကြားဘူးတာ အခုတော့ကိုယ့်ဆရာတော်တွေမကောင်းတော့ အရှင်ဘုရားတို့ဆရာတော်တွေတဲ့ဆရာမကောင်းတပည့်ခေါင်းလာရောက်နေပါပြီ။ကိုယ့်ဆရာတော်တွေကလည်း ဆရာကြီးပြောတာကမှနည်းနေသေးတာဆိုတော့ဒီလောက်ပြောပြီးရပ်သွားတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရအုံးမှာပါ။ ကိုယ့်ဆရာတော်တွေကြောင့် မျက်နှာငယ်နေရတဲ့ဘ၀ကနေ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာမျက်နှာမငယ်ရပဲသာသနာ့ဂုဏ်ရောင်ပြန်လည်ထွန်းတောက်စေ လာတာကတော့ ၂၀၀၇စက်တင်ဘာသံဃာ့ရွှေဝေါရောင်တော်လှန်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ သာသနာ့အာဇာနည် သံဃာတွေက ငါတို့တော့ ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ပြည်သူဘဏ္ဍတွေခိုစားရောင်း ထုတ် သံဃာတော်တွေကိုသတ်ဖြတ် သာသနာတော်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူယုတ်မာ ဗာလ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့တော့မပေါင်းဘူးဟေ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အသေ၀နာစဗာလာနံလူမိုက်ကို မမှီဝဲမပေါင်းသင်းခြင်းသည်မင်္ဂလာမည်သည်ဆိုတာကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးလှည်းနေလှေအောင်းမြင်းစောင်းမကျန်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသာသနာ့အာဇာနည်တွေလို အသေ၀နာစဗာလာနံဆုိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံး လက်တွဲညီညီဖြင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြမည်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးသည် လူယုတ်မာတွေကင်းစင်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီး ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ခံစားတင်ပြရင်း………………………………………………
အသေ၀နာ စ ဗာလာနံ…..လူမိုက်ကိုမမှီဝဲမပေါင်းသင်းခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။
I want all my friends to improve theirs English.
www.engvid.com(better for Grammar)
www.u.s.a.learns.com(better for four skills)
www.effortlessenglish.com(better for only speaking)
www.bbclearningenglish.com(better for four skills)
www.voaspecialenglish.com(better for four skills)
www.eflnet.com(better for four skills)
www.rong-chang.com (better for four skills)
Posted by dhamma at 8:44 PM0comments
This is not an election.It is likeafootball game...
အသေ၀နာ စ ဗာလာနံ …..လူမိုက်ကိုမမှီဝဲမပေါင်းသင်းရခြင...